अर्थ/उद्योग Archives - Naya Pusta
Home > अर्थ/उद्योग
आजको विनिमय दर : कुन देशको कति ? यस्तो छ घटबढ …
Naya Pusta January 19, 2018 अर्थ/उद्योग
काठमाडौं, ५ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २७ रुपैयाँ १६ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ९७ पैसा र विक्रिदर २८ रुपैयाँ १४ रुपैयाँ छ । युएई दिर्हाम एकको खरिददर २७
बिहीबार रियाल, रिंगिट, दिर्हाम र दिनारको सटही दर कति छ ?
Naya Pusta January 18, 2018 अर्थ/उद्योग
काठमाडौं, ४ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २७ रुपैयाँ १८ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ९९ पैसा र विक्रिदर २८ रुपैयाँ १५ रुपैयाँ छ । युएई दिर्हाम एकको खरिददर २७
फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, यस्तो छ नयाँ मूल्यदर
Naya Pusta January 18, 2018 Special News, अर्थ/उद्योग
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ। बुधबार रातिदेखि लागू हुनेगरी निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार पेट्रोलमा रु एक, डिजल र मट्टितेलमा रु दुई मूल्य बढ्ने निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिए। मूल्य बढेपछि पेट्रोल रु १०३ र
आजको विनिमयदर : रिंगिट, रियाल र दिर्हामको मूल्य बढ्यो, कसको कति ?
Naya Pusta January 17, 2018 January 17, 2018 अर्थ/उद्योग, प्रवास
काठमाडौं, ३ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २७ रुपैयाँ २४ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २८ रुपैयाँ ०६ पैसा र विक्रिदर २८ रुपैयाँ २२ रुपैयाँ छ। युएई दिर्हाम एकको खरिददर २७ रुपैयाँ
आजको विनिमय दर : रिंगिटको मूल्य बढ्यो, रियाल र दिनार कमजोर
Naya Pusta January 16, 2018 अर्थ/उद्योग, विश्व
काठमाडौं, २ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २७ रुपैयाँ ०१ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ८२ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ ९८ रुपैयाँ छ। युएई दिर्हाम एकको खरिददर २७ रुपैयाँ
नियमित सेक्स गर्ने महिला यसरी चिनिन्छ, यस्तो छ रोचक जानकारी
Naya Pusta January 15, 2018 अर्थ/उद्योग
महिलाहरु प्राकृतिक रुपमा नै आफैमा सुन्दर हुन्छन् । उहीहरुको सुन्दरताको सदाबहार तारिफ नै हुन्छ । तर पुरुषको तुलनामा महिलाको शारीरिक बिहे लगत्तै नै परिवर्तन भइहाल्छ । के कारण छ त्यसको पछाडी ? सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्स का सोधकर्ताले हालै गरेको अध्ययनका अनुसार नियमित सेक्स गर्ने महिलाको शारीरिक बनावट केही मात्रामा परिवर्तन
आजको विनिमयदर : रियाल, रिंगिट, दिर्हाम र दिनारको मूल्य कति छ ?
काठमाडौं, १ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २७ रुपैयाँ ०७ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ८८ पैसा र विक्रिदर २८ रुपैयाँ ०४ रुपैयाँ छ। युएई दिर्हाम एकको खरिददर २७ रुपैयाँ
Naya Pusta January 12, 2018 अर्थ/उद्योग
काठमाडौं, २८ पुस । सुनको भाउ शुक्रबार तोलामा २ सय रुपैयाँ बढेको छ । सुन आज तोलाको ५६ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । बिहीबार ५६ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ शुक्रबार तोलामा २ सय रुपैयाँ बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । चाँदीको भाउ भने
कोरियन वन कमजोर, रियाल, रिंगिट र दिर्हामको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं, २८ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २७ रुपैयाँ ०८ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ २४ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ८९ पैसा र विक्रिदर २८ रुपैयाँ ०५ रुपैयाँ छ। युएई दिर्हाम एकको खरिददर २७ रुपैयाँ
रियाल, रिंगिट र दिर्हामको मूल्य घट्यो
Naya Pusta January 11, 2018 अर्थ/उद्योग
काठमाडौं, २७ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २७ रुपैयाँ ०५ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ २१ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ८६ पैसा र विक्रिदर २८ रुपैयाँ ०३ रुपैयाँ छ । युएई दिर्हाम एकको खरिददर २७